မိႈမၚရံဎၚလ႕အပူၚဖ်ဲးဒီးတႈဒဲးဘးအဃံဥအမူးအဘူဥနံၚ ၈’၉’၂၀၂၁ | Radio Veritas Asia
ဘဥဃးမိႈစီဆွံမၚရံဎၚ အပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးအဃံဥအမူးန႔ဥ ပွၚအါဒံအါဂၚ စူႈနဏ၀ဲဒဥ လ႕ပ်႕ၚ လံဏလံဏလံန႔ဥလီၚ’ ဎ့ဥရွဴးခရံဏလ႕ ကဟဲလီၚဆူဟီဥခိဥလ႕ ကပ်ႈကြံဏန႔ႈ၀ဲဒဥ ပွၚဟီဥခိဥဖိ ပွၚတႈဒဲးဘးဖိသ့ဥတဖဥ အတႈကမဥဒီး တႈဒဲးဘးအဂီႈ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚ အိဥထီဥ၀ဲ အဟုးအသးလ႕ အပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးအဃံဥအမူးန႔ဥလီၚ’ ဘဥဃးတႈသ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ ပွၚလ႕ပ်႕ၚသ့ဥတဖဥ စူႈနဏတ့ႈပဏ၀ဲလံန႔ဥလီၚ’
ဘဥဃးတႈသိဥတႈသီ သ့ဥတဖဥအံၚန႔ဥ ဘဥတႈထံဥန႔ႈ အခီဥထံးခီဥဘိလ႕ လံဏစီဆွံအပူၚဒီး တႈအိဥဖွိဥလံဏ အတႈစံဥစိၚတဲစိၚအပူၚ လ႕ပါပါပံၚအူ(၉) ဂၚတဂၚ အတႈကတိၚသ့ဥ တဖဥအဖီခိဥန႔ဥလီၚ’ တႈကတိၚသ့ဥတဖဥအံၚ ပွၚထိဥသႀတီၚဒီးတႈကတိၚ အဂၚတသ့နီတမံၚဘဥလီၚ’ တႈကတိၚအ၀ဲအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ တႈဒိဥကစႈဎြၚ အတႈကတိၚဒီး ဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥ လီၚတံႈလီၚဆဲးဖဲ ၁၈၉၄ နံဥလါ December (8)သီန႔ဥလီၚ’
ဒ္သိးမိႈစီဆွံ မၚရံဎၚဒီး မုႈကီၚလံႈသ့ဥတဖဥ အဘ႕ဥစ႕ၚ တႈဘဥလီၚဖီဒ့ တအိဥအဂီႈ တႈကတိၚအိဥပဏ၀ဲဒဥလ႕ ၁မိၚရွ့ ၃း၁၅ န႔ဥပဏဖ်ါထီဥ၀ဲဒဥလ႕ (နၚဒီးပွၚပိဏမုဥသ့ဥတဖဥမ့ႈဂ့ၚယ နပွၚကလုဏဒူဥဖိဒီး ပွၚပိဏမုဥဖိသ့ဥတဖဥ အပွၚကလုဏဒူဥ သ့ဥတဖဥစ့ႈကီး ဎကမၚကဲထီဥဎဲဒဥလ႕ ပွၚအဒူဥအဒါန႔ဥလီၚ’)
တႈကတိၚအ၀ဲအံၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ မူခိဥကလူးစံးဘဥ၀ဲ မိႈစီဆွံမၚရံၚဎၚ လ႕အကဘဥဒ႕ထီဥဒီး ပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးအဃံဥအမူး အဂ့ႈန႔ဥလီၚ’ ဆ႕ကတီႈဖဲ မူခိဥကလူး လဲၚတုၚဆူမၚရံဎါ အိဥအခါ စံး၀ဲဒဥပိဏမုဥလ႕ အဒိးန႔ႈဘဥ တႈဆိဥဂ့ၚ တဂၚမ္တႈလၚကပီၚ ဘဥနၚတက့ႈယ ကစႈဎြၚန႔ဥ အိဥ၀ဲဒဥဒီးနၚန႔ဥလီၚ’
(လူကဥ ၁း၂၈)အံၚန႔ဥ ပထံဥဘဥပ၀ဲဒဥလ႕ တႈဂ့ႈလ႕အလီၚတံႈ လီၚဆဲးသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ပွၚစီဆွံမုဥအဲလံစဘ့ဥန႔ဥ လဲၚ၀ဲဆူမိႈစီဆွံ မၚရံဎၚအအိဥဒီးစံး၀ဲဒဥ (နၚန႔ဥလ႕ပိဏမုဥခဲလ႕ဏအက်ါ နမ့ႈပိဏမုဥလ႕အစိကမီၚ ဒိဥတုဏတဂၚ န႔ဥလီၚ (လူကဥ ၁း၄၂) ကဲထီဥ၀ဲဒဥလ႕ တႈဂ့ႈလၚီတံႈလီၚဆဲးန႔ဥလီၚ’ ဆ႕ကတီႈဖဲ ခ့ခါနံဥတ၀ဏန႔ဥ ဘဥဃးမိႈစီဆွံမၚရံဎၚ ဘဥတႈဒ႕ထီဥဒီး ပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးအဂ့ႈအက်ိၚန႔ဥ လ႕တႈအိဥဖွိဥ ပွၚကူဥဘဥကူဥသ့သ့ဥတဖဥ အဘ႕ဥစ႕ၚ ကဲထီဥ၀ဲတႈ ကတိၚအါ တခါစ့ႈကီးန႔ဥလီၚ’
ဒ္သိးဘါနဥဒီး အၚကြဲနဥန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥ တႈဘူဥတႈဘါ အပွၚကူဥသ့သ့ဥတဖဥဒီး ဎသ့ဥအတႈကရ႕ကရိ ပွၚစီဆွံတီမံန႔ဥစ့ႈကီး ဆိကမိဥ၀ဲဒဥလ႕ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚန႔ဥ အိဥထီဥ၀ဲ အဟုးအသးဃုဏဒီး တႈဒဲးဘးန႔ဥလီၚ’ လ႕အ၀ဲသ့ဥအတႈထံဥဒီး အတႈဆ႕တဲဏသ့ဥတဖဥအဖီခိဥ ဒိဥစ္စကိၚတိၚ ဒီးပွၚစီဆွံဖရဥစ့ဥ အပွၚတႈကရ႕ကရိဖိသ့ဥတဖဥ တုႈလိဏ၀ဲဒဥလ႕ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚန႔ဥ မ့ႈ၀ဲဒဥမိႈလ႕ အိဥထီဥအဟုးအသးလ႕ အပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးတဂၚန႔ဥလၚီ’
ဖဲ ၁၈၉၄ နံဥန႔ဥ ပါပါသီခါကရ႕ႈခိဥ ပံၚအူ(၉)ဂၚတဂၚ န႔ဥတ႕ဥပီဥတ႕ဥပီ၀ဲဒဥဒီး လုၚဃူမၚလီၚတံႈက့ၚ၀ဲ တႈဂ့ႈအံၚန႔ဥလီၚ’ ဒီးပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ ဟီဥခိဥခ်႕ဒီ ဘ့ဥဎ့ဥရွဴး အတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအဂ့ႈန႔ဥ မိႈမၚရံဎၚန႔ဥ ပဏဃုဏ၀ဲဒဥလီၚ အဃိမိႈစီဆွံ မၚရံဎၚန႔ဥမ့ႈ၀ဲဒဥ ပွၚလ႕အိဥထီဥ အဟုးအသးလ႕ အပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးအဃံဥအမူး အလီၚတံႈလီၚဆဲးတဂၚန႔ဥလီၚ’
အ၀ဲပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈဂ့ႈအ၀ဲအံၚ၀ံၚမဥဒီး ဘဥဃးပွၚတႈကတိၚ အါလိဏသးသ့ဥတဖဥ လီၚမႈကြံဏ၀ဲဒဥ န႔ဥလၚီ’ ဘဥဃးတႈသိဥတႈသီ အ၀ဲအံၚန႔ဥ ပဒိးန႔ႈဘဥ ပ၀ဲဒဥလ႕ဖဲ ၁၈၅၈ နံဥဖဲလုဥစ္၀့ႈ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚ အတႈလီဥဖ်ါထီဥအသးန႔ဥလီၚ’ ပွၚလ႕အထံဥဘဥ တႈလီဥဖ်ါထီဥအသးလ႕ အမ့ႈဘဲနဒ့ဥန႔ဥ သံကြႈ၀ဲ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚလ႕ အမ့ႈပတဂၚအခါ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚ စံးဆ႕၀ဲဒဥလ႕ ( ဎမ့ႈ၀ဲဒဥ မိႈစီဆွံမၚရံဎၚလ႕ အပူၚဖ်ဲးဒီး တႈဒဲးဘးအဃံဥ အမူးတဂၚန႔ဥလီၚ’)
ပွၚတႈမ႕ဖိ အၚျဒဴ (၃၀’၁၁’၂၁)
ပွၚစီဆွံမုဥ Cecilia (22.11.21)
ပွၚစီဆွံမုဥ အဲလံစဘဲဥ(၁၂၀၇”၁၂၃၁) , St . Elizabeth of Hungary , Pray for us ( 17 .11. 21)
ဆ႕ဂ့ၚဎဲနၚလီၚ. တႈဘ်ဳးဒိဥမးလ႕ နကြႈဒီးဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါပ Radio Veritas Asia န႔ဥလီၚ. ပအဲဥဒိးသ့ဥညါနၚအါထီဥတစဲးန႔ဥလီၚ. ပမ့ႈသံကြႈနၚတႈသံကြႈ စွၚဖ်႕ဥန႔ဥကသ့ဧါ?